धनी वा सफल हुने टिप्सहरू! | सुदुरपश्चिम खबर
सफल हुने इच्छा कसलाई हुँदैन र? तपाईलाई पनि त सफल हुने इच्छा छ, होइन र? केमा सफल हुने भन्नुहोला। तपाई जेमा सफल हुन चाहनुहुन्छ त्यसैमा। विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदुर, पत्रकार, लेखक, खेलाडी, गृहिणी, वकिल, डाक्टर, राजनीतिज्ञ, नेता, नीजि व्यवसायी आदि आदि।
मानिसले आफूले चाहेको काममा सफल हुँदै जानु भनेको जीवनमै सफल हुँदै जानु हो। सफल हुनुको अर्थ हो खुसी हुनु र असफल हुनुको अर्थ हो दुखी हुनु। यसलाई अझै सारमा भन्ने हो भने सायद मानिस खुसी हुनुको अर्थ सफल हुनु हो र दुखी हुनुको अर्थ असफल। मानिसले जीवनममा खोजेको र चाहेको खुसी हो। केही मानिस जीवनमा धेरैथोक भएर पनि सफल हुन नसकेर निरास छन्, तनावमा छन्, दुखी छन्।
हामीमा केहि न केहि कमजोरी आवश्य छ, जसले अगाडि बढ्नका लागि रोकिरहेको छ । त्यस्तो कमजोरी के हो ? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? यसको मेसो पनि पाइरहेका हुँदैनौ ।त्यसैले सफल कसरी हुने, धनी कसरी हुने भन्ने कुरामा हामीले त्यही व्यक्तिको विचार, कार्यशैलीलाई अनुसरण गर्नुपर्छ, जसले वास्तवमै सफलता हासिल गरेका छन् । जस्तो कि, स्टीव जब्स । विश्वका सर्वाधिक लोकप्रिय ब्रान्ड ‘एप्पल’का सह संस्थापक हुन् उनी । उनै स्टीब जब्सले कसरी सफल हुने भन्ने कुरामा आफ्नो अनुभव साझेदार गरेका छन् ।
तपाईसँग निश्चित समय छ, जो तपाई आफ्नै लागि सदुपायोग गर्नुहोस् । अनावश्यक कुरामा अल्भिएर समय बर्वाद नगर्नुहोस् ।दोस्रोको बिचारलाई हामीमाथि त्यती धेरै हावी हुन नदिनुहोस् कि आफ्नो भित्री आवाज सुन्न नसकियोस । सधै आफ्नो दिल र दिमागले चल्नुहोस् ।पछिल्लो ३३ बर्षमा मैले स्वंमलाई ऐनामा हेर्दै आएँ । तर, मैले हरेक दिन स्वंमलाई सोधे कि यदि आज मेरो जीवनको अन्तिम दिन हो भने मे के गर्न चाहन्छु ? तर, कहिले मैले यसको जबाफ सुनिन । म जान्दछु कि मैले बद्लिनुपर्छ । मर्ने समयमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेर मर्नुमा मलाई कुनै मतलब छैन । हरेक रात ओछ्यानमा गएर राती यहि सोच्छु कि, आज पुरा दिन मैले नयाँ के गरे ? यसले मेरो जीवनमा के महत्व राख्छ ?
तपाईले धेरै मिहेनत गर्नुपर्छ ताकि तपाईको सोंच स्वच्छ बनिरहोस् । सोंचलाई सफा र सरल बनाउनु पर्छ । यसका लागि मिहेनत गर्नुपर्छ । मिहेनतबाट मिल्ने यस्तो सोच परिणामका लागि ठूलो मूल्य राख्छ । किनभने यो पाएर तपाई पहाडलाई पनि हल्लाउन सक्नुहुनेछ ।यदि तपाई कुनै राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको नतिजा पनि राम्रो हुनुपर्छ । त्यसेलै यसका लागि तपाईले केहि नयाँ सोच्नुपर्छ । तपाई कहिलेसम्म एकैखाले काम गरिरहनुहुन्छ ? सोच्नुहोस् अव तपाइको लागि अलग काम के छ ?तपाईले कुनैपनि कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ । तपाईको साहस, संभावना, भाग्य, जीवन, उर्जा वा कर्म जसमा पनि विश्वास गर्नुहोस् । यो दृष्टिकोणले तपाईलाई कहिल्यै गिर्न दिनेछैन ।
केहि समयसम्म मनपर्दो बिचार र नयाँ प्रौद्योगिकको खोज गरेपछि एक कम्पनीलाई परिवर्तन गर्न बर्षौ समय लाग्छ । यो सबै गर्नका लागि एकदमै अनुशासनको आवश्यक्ता छ । कहिले कहिले जिन्दगीले तपाईको टाउकोमा इंटा पनि बजार्न सक्छ । तर, यस्तोमा तपाईको विश्वास हराउनु हुँदैन । कुनै विशेष समुदायलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन डिजाइन गर्न एकदमै मुश्किल हुन्छ । किनभने धेरैलाई थाहा छैन कि उनीहरु के चाहन्छन, जबसम्म उनीहरुलाई तपाईले देखाउनु हुनेछैन । जब कुनै समस्या आउनसाथ मानिसहरु सोध्छन् कि, यो के भयो ? जबकी सहासी युवा सोध्छन् कि यससँग हामीले कसरी जुध्न सक्छौ ?
तपाईको कामले जिन्दगीलाई सन्तुष्ट तुल्याउनु हो । र, सन्तुष्ट प्राप्त गर्नका लागि त्यही गर्नुहोस्, जसमा तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ । महान काम गर्नेको एकै तरिका छ, तपाई जे गर्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नुहोस् ।कोहि मर्न चाहँदैनन् । त्यो व्यक्ति जो स्वर्ग जान चाहन्छन्, ऊ पनि मर्न चाहँदैन । तर, मृत्युले कसैलाई बचाउँदैन । मृत्यु जीन्दगीको श्रेष्ठ आविष्कार हो । यो जीवन परिवर्तन गर्ने माध्याम हो, जसले पुरानो मेटाएर नयाँ देखाइदिन्छ । गुणवत्तामा विश्वास गर्नुहोस् । हामीले अलग बाटो रोज्यौं । हामीलाई विश्वास छ कि, यदि उपभोक्तालाई राम्रो एवं गुणस्तरिय उत्पादन दियौ भने उसले आफ्नो पर्स खोलिरहन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले चाहेको या इच्छाएको लक्ष्य, सपना, तृष्णा, कामनाको प्राप्तिलाई नै सफलता भनेर भन्न सकिन्छ । सफलताका लागि सपना देख्न, कामना गर्न जति नै सजिलो छ त्यसलाई प्राप्तगर्न त्यति नै गाह्रो छ । जमाना क्षण प्रति क्षण प्रतिष्पर्धात्मक बन्दै गइरहेको छ । यस प्रतिष्पर्धात्मक जमानामा सफलता नचाहने व्यक्तिहरु साहेदै होलान । सफलताको चाहनगर्ने व्यक्तिले बुद्धत्व या निर्वाण प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । यहाँ म सफलताको विषयमातर्क गर्नु भन्दापनि सफलता कसरी प्राप्तगर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही लेख्न चाहन्छु । सफलताप्राप्तगर्नकालागि धेरै कुराहरुको आवश्यकता पर्दछ । यहाँ सफलताप्राप्त गर्न चाहिने आधारभूततत्वहरुको कुरा गरौँ ।
सफलता प्राप्तिको सबैभन्दा पहिलो पाइला भनेको लक्ष्य हो । सफलता चाहने मान्छेले सर्वप्रथम आफ्नो रुचि अथवा आवश्यकता अनुसारको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी तपाई घरबाट निस्कनु अगाडि कुन ठाउँ जाने भनेर पहिला सोच्नुहुन्छ अनि मात्र घरबाट निस्कनुहुन्छ । कुन ठाउँमा जाने भन्ने निर्धारण नगरेर तपाई हिँड्नुभयो भने तपाई कही पुग्नुहुन्न । बीचमै अल्मलिनु हुन्छ, भट्किनुहुन्छ । त्यसैगरी तपाईसँग जीवनमा लक्ष्य छैन भने तपाई सफलहुने कुरा त परै जाओस तपाईलाई सहज रुपमाबाँच्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
हामीले सफलता प्राप्त गर्नको लागि छोटो अवधिको, मध्यअवधिको र लामो अवधिको लक्ष्य पहिल्याउनु अति नै आवश्यक हुन्छ । लक्ष्यनिर्धारण सफलता प्राप्तिको लागिपहिलो खुट्किलो हो । धेरै मान्छेहरु जीवनमा लक्ष्य विहीन हुन्छन् । लक्ष्य बनाउँदा लक्ष्यलाई अलि ठूलो नै बनाउनु पर्छ । लक्ष्यको सम्बन्धमा भारतीय पूर्व राष्ट्रपति स्व. एपी जे कलामले भन्नुभएको छ ‘जीवनमा सानो लक्ष्य राख्नु अपराधहो, त्यसैले जीवनमा लक्ष्य ठूलो बनाउनु पर्छ ।’
२) योग्यता र ज्ञान
लक्ष्य निर्माणपछि चाहिने अर्को महत्वपूर्ण कुरा योग्यता र ज्ञान हो । लक्ष्य निर्धारणपछि त्यो लक्ष्य प्राप्तगर्न केकस्ता योग्यता, ज्ञान, सीप र कौशलता चाहिन्छन् त्यसलाई पहिचान गरी तिनीहरुलाई खोज्ने र प्राप्तगर्ने कामगर्नुपर्छ । हाम्रो जीवनको उद्देश्य कसरी प्राप्तगर्ने भन्ने बाटो हामीमाभएका योग्यता र ज्ञानले नै बनाउँछन् । सामान्य भाषामा कलेज, विश्वविद्यालयको डिग्रीलाई ज्ञान या योग्यता भनिन्छ तर विश्वविद्यालयको डिग्रीले मात्र सफलता हासिलगर्न गाह्रो हुन्छ ।
त्यसैले विश्वविद्यालयको डिग्री बाहेक लक्ष्यप्राप्तिका लागिचाहिने कौशल, ज्ञान, कला आदि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । धेरै मान्छेहरु लक्ष्य त निर्धारण गर्दछन् तर त्यो लक्ष्य प्राप्तिकालागि अत्यावश्यक योग्यता, ज्ञान हासिलगर्न सक्दैनन र असफल हुन्छन् । सफलता प्राप्तिकालागि यदि लक्ष्य निर्धारण पहिलो सिँढी हो भने योग्यता र ज्ञानलाई दोस्रो सिँढी भन्न सकिन्छ ।
३) स्पष्ट योजना
ठूलो या सानो, लामो अवधि या छोटो अवधिको लक्ष्यको स्वरुप अनुसार स्पष्ट खाका या योजनाबनाउनु पनि महत्वपूर्ण छ । कुनै लक्ष्य प्राप्तगर्न धेरै चरण पार गर्नुपर्छ । धेरै प्रक्रिया पछ्याउनु पर्छ र विभिन्न सिँढी चढ्नुपर्छ । ती चरण, प्रक्रिया र सिँढीको वर्णन र त्यसमा पुग्नकालागि गर्नुपर्ने कामको विवरणको योजना बनाउनु पर्छ ।
यदि योजना स्पष्ट र ठोस भएमा सफलता प्राप्तगर्न सजिलो हुन्छ नत्र भने बाटोमा बीचमै हराउनपनि सकिन्छ । धेरै मान्छेहरु योग्यता र ज्ञान हुँदाहुँदै पनि सफलता प्राप्तगर्न सक्दैनन् । किनकी उनीहरुसँग स्पष्ट योजना या खाकाहुँदैन । लक्ष्यप्राप्तिका विभिन्न चरणहरु मध्ये कुन चरणमा कसरी प्रवेश गर्ने स्पष्ट जानकारी योजनाबाट प्राप्त हुन्छ ।
सफलताप्राप्तिमा सोचको ठूलो महत्व छ । सामान्यतया सोचलाई नकारात्मक र सकारात्मक सोच गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । यी दुई सोचहरुमध्ये सकारात्मक सोचले तपाईको लक्ष्यप्राप्तिमा ठूलो मद्दत गर्दछ तर त्यसको ठिक उल्टो नकारात्मक सोचले सफलता प्राप्तिमा ठूलो वाधा दिन्छ । वास्तवमा सोच नकारात्मक राखेर जति नै मिहिनेत गरे पनि सफलता प्राप्तगर्न सकिँदैन । कहीँ न कहीँवाधा आइलाग्छ, यस्तो अवस्थालाई धेरैजसो मान्छेहरु दुर्भाग्य भनेर भन्दछन् तर भाग्य र दुर्भाग्य भन्ने केही हुँदैन ।
यदि तपाई सकारात्मक भावसहित कठिन मिहिनेत गर्नुहुन्छ भनेदेखि अवश्य सफलता प्राप्तगर्नुहुन्छ । यो कुनै भाग्यको कुरा होइन । यो त तथ्य हो । धेरै दर्शनशास्त्रीहरु ‘तिमी जस्तो सोच्दछौँ त्यस्तै बन्दछौ’ भन्दछन् । कामगर्दा फेल भइन्छ कि, बिग्रिन्छ कि, बर्बादै हुन्छ कि, सकिन्नहोला, खत्तमै हुन्छ जस्ता नकारात्मक सोचाइ राख्नुहुन्न ।हरेक परिस्थितिमा सोचलाई सकारात्मक राख्नुपर्दछ । परिस्थिति नकारात्मकभए पनि सोचलाई सकारात्मक बनाउनु पर्दछ । म तपाईलाई विश्वासका साथ भन्दछु कि, सकारात्मक सोचले सकारात्मक धारणा निर्माण गर्दछ । सकारात्मक धारणाले सकारात्मक भावना निर्माण गर्दछ । सकारात्मक भावनाले सकारात्मक बानीव्यहोरा निर्माण गर्दछ र सकारात्मक कार्य निर्माण गर्दछ । अन्ततः सकारात्मक कार्यले सकारात्मक फल या सफलता ल्याउँछ ।
सफलता प्राप्तगर्नका लागि अति नै महत्वपूर्ण तत्व भनेको हाम्रा योजनाहरुको कार्यान्वयन हो । सबैभन्दा धेरै मान्छेहरु यहाँनिर चुक्दछन् । धेरै मान्छेहरु लक्ष्य प्राप्तिका लागि राम्रो योजना र खाका बनाउँदछन् तर त्यो योजना र खाकालाई कार्यान्वयन गर्दैनन् या कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो हुन्छ । जसले गर्दा असफलता झेल्दछन् । मैले आफनो व्यक्तिगत अध्ययनबाट के पाएको छु भने योजनाबनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनगर्ने मान्छेमध्ये लगभग७० प्रतिशतले सफलता प्राप्त गरेरै छाड्दछन् ।
हाम्रो देश असफलहुनुको गतिलो उदाहरण कार्यान्वयन पक्षको कमीहो । योजना, नीतिनियम, खाका सबै राम्रो बनाइन्छ तर कार्यान्वयन एकदमै प्रभावशून्य हुन्छ । हाम्रो देशमाजति राम्रा योजना, खाका, नीतिनियम बनाइएका छन् ती सबै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भइदिएको भएहाम्रो देश नेपाल पनि विकशित मुलुकमा गनिन्थ्यो । कुनै पनि योजना र खाका कार्यान्वयन नभएसम्म फलता प्राप्ति शुन्य नै हुन्छ ।जसरी तलाउको स्थिर पानी शक्तिविहीन हुन्छ र त्यसलाई बगाएपछि मात्र शक्ति प्राप्त हुन्छ यसैगरी योजना कार्यान्वयनपछि मात्र नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सफलता प्राप्त गर्नका लागि सबै तत्वको आ(आफ्नो महत्व छ तर कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
द गोस्पलअफ बुद्ध भन्ने किताबमा बुद्धको वाणी राखिएको छ । ‘धैर्यता एउटा शक्तिशालीहतियार हो ।’ जुनहतियारले लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा आइलाग्ने सम्पूर्ण विघ्न वाधाहरुलाई ध्वस्त बनाउँदछ। सफलताप्राप्तगर्नु कुनै चानचुने कुरा होइन, कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समस्या, उतारचढाव आउँदछन् । लक्ष्य प्राप्तगर्न समय लाग्छ । हामीले सोचेभन्दा धेरै समय लाग्दछ । ती सबैलाई धैर्यतापूर्वक सहनु पर्दछ ।अनि त्यसपछिमात्र सफलता हात लाग्दछ । एकजना गायक बन्न ठूलो तपस्या, समर्पण, मिहिनेत, समय चाहिन्छ । एक रातमै कोहीपनि सफलहुँदैन । त्यसैगरी एउटा नृत्यंगनाले नृत्यको एउटा स्टेप सिक्न हजारौँ बार कोशिस गर्नुपर्दछ । सफलता प्राप्तगर्न त्यति सहज र सजिलो भइदिए संसारका सबै मान्छेहरु सफलहुने थिए । धैर्य हुनसिक्नु पर्दछ, सहनसिक्नुपर्दछ, पर्खन सिक्नुपर्दछ । सफलता कहिले पनि रेडिमेड (तयारी) हुँदैन । सफलताको तयारी आफैले गर्नुपर्दछ ।
७) असफलता झेल्ने क्षमता
हाम्रो योजनाको कार्यान्वयनपछि त्यसको नतिजा आउँदछ । त्यसमा असफलहुने चान्स धेरै हुन्छ । धेरैजसो सफलताको खोजकर्ताहरु यहीआएर ठोकिन्छन् । एकचोटी असफल भएपछि फेरि प्रयास गर्दैनन्, अर्को कामतिर हात हाल्दछन्, थोरैले दुई तीनचोटी पुनःप्रयास गर्दछन् । फेरि असफलता हातलागेपछि आफैलाई धिक्कार्दै या अरुलाई धिक्कार्दै काम रोक्दछन् । तर सफल मान्छेसँग सयौँ असफलता झेल्ने क्षमता हुन्छ । वेलायतका दोस्रो विश्वयुद्धताकाका प्रधानमन्त्री विन्स्टीन चर्चीलले भन्नुभएको छ कि ‘जोश नगुमाइकन असफलतापछि असफलता प्राप्तगर्नु नै सफलता हो ।’
दुई चारओटा असफलता बाटै डराउने, भाग्ने मान्छे कहिल्यै सफलहुन सक्दैन । असफलतालाई पनि खुसी साथ मुस्कुराउँदै सहने र फेरि जोशजाँगरसाथ कार्यान्वयनमा लाग्ने मान्छे नै वास्तविक सफलताको हकदार हुन्छ । इतिहासमा हामीले सफल मान्छेको जीवनीबाट यो थाहा पाउँदछौँ । चाहे अब्राहम लिंकन हुन्, चाहे हजारौँ वस्तुका आविष्कारक एडिसन हुन् या महात्मा गान्धी नै हुन् अथवा अरु नै कोही ती सबैले सफलता प्राप्तगर्नु अगाडि सयौँ हजारौँ असफलता व्यहोर्नुपरेको थियो ।
असफलतापछि थपजोश, जाँगर, योग्यता र ज्ञान लिएर पुनःकार्यान्वयमाजानु पर्दछ । पुनःकार्यान्वयनमा कतिचोटी जाने भन्ने हुँदैन । सफलता प्राप्त नगरुन्जेलसम्म पुनःकार्यान्वयनमागइरहनु पर्दछ । अगाडिको असफलताबाट शिक्षालिँदै नयाँ ढंगले पुनःकार्यान्वयनमा लाग्न जरुरी छ । हरेक असफलताले नयाँ पाठ सिकाएर जान्छ र नयाँ पाठसहित कार्यान्वयनगर्दा सफलताको सिँढीमा पुग्न तपाईलाई यस संसारमा कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।
९) सफलताको आनन्द
हुन त, यो सफलता प्राप्तिको आवश्यक तत्व होइन । बारम्बारको प्रयासबाट सफलता हासिल भएरै छाड्दछ । तर आजको यो प्रतिष्पर्धात्मक युगमा मान्छहरुले सफलता त प्राप्त गरेका छन् तर त्यसबाट आनन्द लिन सकिरहेका छैनन् । जति धेरै सफल मान्छे त्यति धेरै टेन्सन, स्ट्रेस, हृदयघात, भागदौड, वेचैनी, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा । आज मान्छे सफलभएर पनि खुसीहुन सकिरहेको छैन ।
भौतिक रुपमा सफल भएर मात्रहुँदैन । भौतिक सफलता सँगसँगै आध्यात्मिक, भावनात्मक, सामाजिक सफलतापनि जरुरी छ । जसले हामीलाई जीवनमाआनन्द र खुसी दिन्छन् । ‘सफलता प्राप्त गरेपछि खुसी हुने’ भन्ने गहिरो मानसिकता छ, त्यो झुठ हो । सफलता प्राप्तिको प्रयास र खुसीहुने काम सँगसँगै हुनुपर्दछ । अनिमात्र सफलता सार्थक हुन्छ । हामी हाम्रो प्रियजन, परिवार, समाज, अध्यात्मसँग जोडिएर रहनुपर्दछ ।